'फुटपाथको जिन्दगीमा रमाउँथ्यो प्रकाश'
७ मंसिर २०७५, शुक्रबार १९:१८
कहिलेकाहीँ लाग्छ, ‘प्रकाशको बारेमा जस्तो गलत प्रचार गरियो, ऊ बिल्कुल त्यस्तो थिएन । आज उनी हामीसँग छैनन्, म घरिघरि सोच्छु, ‘समाजले प्रकाश भाइप्रति किन यति धेरै अन्याय गरेको होला ? उनका राम्रा काम र अनुकरणीय देन किन ओझेल पारिएको होला ?’
– जीवन आचार्य, भिनाजू
२०७४ मंसिर ३ गते झिसमिसेमै गङ्गाको मोवाइल बज्यो, एक्कासी गङ्गाले आत्तिदै भनिन्, “भाइ बिरामी भएर हस्पिटल लगेको छ रे।” सोचें,“सामान्य केही भएको होला।” सायद भाइ प्रकाश निरोगी भएका कारण पनि मैले त्यसो सोचेको हुनुपर्छ।
२०७४ मंसिर २१ गते तराइका जिल्लामा सङ्घीय र प्रादेशिक निर्वाचनको चटारो थियो, म मोरङ् ६ (क) को उम्मेदवार भएका कारण निर्वाचनमा सहयोगका निम्ति सानी छोरी ईशान्वीसहित ठूलो भिनाजु सागर केसी विराटनगर आएको २ दिनमात्र भएको थियो।
निर्वाचनको समय भएका कारण बुवा (ससुरा बुवा) त्यो दिन मंसिर ३ गते काँकडभित्ताको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्नका लागि झापामा हुनुहुन्थ्यो। भाइ बिरामी भएको खबरपछि गङ्गाले बुवालाई फोन सम्पर्क गरिन् । बुवाले ‘तुरुन्त आउनू’ भन्नुभएछ, त्यसपछि हामी झापा गयौं ।
बाटोमा यात्राका क्रममा सामान्य नै होला भन्ने विश्वासका साथ झापा पुगियो । त्यहॉ पुगेपछि एकजना प्रहरीले ‘प्रकाशजीको बारेमा खबर नराम्रो छ’ भने । मलाई हस्पिटल लगेको छ, राम्रो भइहाल्छ नि भन्ने भयो । मानिसहरुको घुइँचो लागेको थियो, तात्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि त्यही हुनुहुन्थ्यो, माहोल एकदमै सुनसान थियो । त्यसै क्रममा हामीलाई लिन काठमाडौंबाट हेलिकप्टर आयो, हामी जब हेलिकप्टरमा बस्यौं, अध्यक्ष ओलीज्यूले बुवातिर हेर्दै भन्नुभयो, “जे हुनु भइहाल्यो, तपाईं लगायत परिवारलाई समवेदना छ” भन्नुभयो, त्यो आवाज मेरो कानमा गुञ्जियो ।
म स्तब्ध भएँ, गङ्गालाई हेरें बुवालाई हेरें । यो के भएको हो, मन बेचैन भयो, ऑशु थामिएनन् । विगतमा भाइ प्रकाशसँग बिताएका हरेक पल स्मरण हुन थाले, मनमनै प्रार्थना गर्न थालें, “यो सबै गलत होस्, प्रकाशलाई ठीकठाक देख्न पाउँ । तर, समयले त्यसो गरेन, अन्ततः भाइ प्रकाशले हामीलाई साँच्चै याद मात्र छोडेर सदाका लागि बिदा लिइसकेको रहेछ ।
प्रकाश सामान्य स्वभावको थियो, सोझो थियो, सामान्य कुरामा रमाउँथ्यो, सामाजिक काम गर्न रुचि राख्थ्यो । बाटोमा राखिएका ठेलागाडामा मःम खॉदा औधी खुशी हुन्थ्यो प्रकाश । अनावश्यक खर्च नगर्ने बानी थियो । उसले विदेशमा अलपत्र नेपाली युवाहरुलाई स्वदेश फर्काउने अभियान नै चलायो । युवाहरुका हर समस्यामा प्रिय साथी थियो ऊ ।
उसको बारेमा केही भ्रम छरिए, उसमाथि निरन्तर प्रहार भइरह्यो । जीवमा उसले चालेका सबै कदम रहर पक्कै थिएनन्, कति त बाध्यता पनि थिए । तर, दुनियाँले उनका बाध्यता बुझ्ने र खोतल्ने प्रयास कहिल्यै गरेन । कहिलेकाहीँ लाग्छ, ‘प्रकाशको बारेमा जस्तो गलत प्रचार गरियो, ऊ बिल्कुल त्यस्तो थिएन । आज उनी हामीसँग छैनन्, म घरिघरि सोच्छु, ‘समाजले प्रकाश भाइप्रति किन यति धेरै अन्याय गरेको होला ? उनका राम्रा काम र अनुकरणीय देन किन ओझेल पारिएको होला ?’
प्रकाशले बढ्दो उमेरसँगै आफूलाई परिपक्व बनाउँदै लग्यो । दोस्रोपटक बुवा प्रधानमन्त्री हुँदा उसले सचिवालयमा बसेर गरेको मेहेनत अहिले पनि मन्त्रालयका सचिव र कर्मचारीहरु सम्झन्छन् । प्रधानमन्त्रीका रुपमा बुवाले गरेका धेरै निर्णयहरुमा भाइ प्रकाशको सहयोग, सल्लाह र बेजोड मेहेनत छ भन्ने कुरा मलाई राम्रोसँग महशुस हुन्छ ।
भाइ प्रकाश, व्यक्तिगत रुपमा तिमीले गरेको सहयोग र सम्मानप्रति आभारी छु, जीवनभरि आभारी रहनेछु । तिमीले देखेका अधुरा सपना सकेसम्म पूरा गर्ने कोशिस गर्नेछु । यही नै तिम्रा लागि सच्चा श्रद्धाञ्जली हुनेछ, हार्दिक श्रद्धाञ्जली प्रिय भाइ !
Tagsजीवन आचार्य प्रकाश दाहाल स्मृति दिवस